Sales Executive Manager Archives - Glory Assumption Space
Sales Executive Manager - Female (5) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Sales Executive Manager - Female (5) Posts / Salary 400000 Kyats / Tarmwe Township Requirements - Any Graduate. - Experience5Years ရှိရမည်။ - Production,Marketing ပိုင်းကျွမ်းကျင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ ) Ma